Ilmo dhawr bilood jir ah oo ku dhintay dab qabsaday xero barakacayaal oo ku taalla Garowe. – Radio Daljir
Ilmo dhawr bilood jir ah oo ku dhintay dab qabsaday xero barakacayaal oo ku taalla Garowe.
Agoosto 8, 2011 12:00 b 0
Garowe, Aug 08 – Inta la hubo hal qof ayaa ku dhintay hantina waa ku bas-beeshay dab maanta qabsaday xero duddo barakacayaal ahi ay degganayeen oo ku taalla magaalada Garowe taasoo lagu magacaabo xerada barakaracayaasha ee Waabari.
Qof ku dhintay dabka xeradaasi qabsaday ayaa la tilmaamayaa in uu ahaa ilmo aad u yar oo jiray oo kaliya muddo dhawr-bilood ah, waxaana uu ku dhex-gubtay mid ka mid ah cooshado yaryar oo dadkaasi barakacayaasha ahi ay degganaayeen.
Dabkaan ayaa sidoo kale gubay guryo cooshado ka samaysnaa oo hooy iyo gabbaad u ahaa barakacayaasha Waabari, waxaana la tilmaamayaa dabku in uu ka soo bilawdaya dhisme-cooshadeed yar kaddibana uu ku faafay kuwo kale.
Gurmad uu sameeyey maamulka dawladda hoose ee magaalada Garowe iyo dad mutadawaciin ayaa ugu dambayntii lagu guulaystay in la damiyo dabkaasi, waxaana xilligii dabku kacayna xeradaasi laga waday barnaamij cunno-qaybin.
Inta badan xilliyada xagaaga ah ee ay dabayluhu-dhacaan waxaa aad u kordha gubashada kaamamka ay deggan yihiin barakacayaashu, meelahaasi oo ah kuwo aad ugu nugul dab-qabsada marka loo fiiriyo nooca guraha ay deggan yihiin.
Cabdiraxmaan Xuseen Xasan ‘Gaardi’
Radio Daljir Garowe. http://daljir.com/
Barnaamijka Tartan iyo Tacliin oo si xamaasad leh uga socda Radio Daljir iyo natiijada tartamadii xalay.
Khilaaf soo wajahey shirka Ahlu-sunna ee degmada Caabudwaaq, xilli aysan wali soo dhameystirmin martidii lagu casumey madasha.